I-Samsung Galaxy A90, i-A20e kunye ne-A40 ziye zavuza | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy A90, i-A20e kunye ne-A40 yokuvuza kwiwebhusayithi esemthethweni yase-UK yase-UK
Isamsung ayibonakali ngathi ineenjongo zokuphela kumzamo wokugcina ubunkokeli bayo njengomboneleli wokuqala we-smartphone kwihlabathi liphela.
Iimodeli ezintathu ezintsha, el Galaxy A90, i Galaxy A40 kwaye i-Galaxy A20e yadweliswa kwiwebhusayithi yase-UK. Amaphepha awananto kwaye ke awanazo iinkcukacha ze-specs okanye imifanekiso yeemodeli.
1 Galaxy A90
2 IGalaxy A20e
3 Galaxy A40
I-Galaxy A90 ibonakaliswe amatyeli aliqela ngokuvuza. Ngoku oku kubonisa ukuba Imodeli ayizukusebenza kuphela eChina, kodwa iya kufumaneka kwezinye iimarike. I-Galaxy A90 inamahemuhemu okubandakanya ikhamera ye-pop-up, kunye netekhnoloji yokujikeleza kwekhamera. (Fumanisa: I-Samsung Galaxy A10 ngoku isemthethweni: Infinity-V kunye nexabiso elimangalisayo)
I-Galaxy A20e ikholelwa ukuba iyahluka kwi-Galaxy A20. Xa isungula, iya kuba sisixhobo sokuqala kuthotho A ukusebenzisa isimamva «e». Imodeli yayikade ibonwe phantsi kwenombolo yemodeli 'SM-A202F' kwaye inokuthi nje ibe yinto eyahluliweyo yeGalaxy A20. Isixhobo kulindeleke ukuba sifike kwiimarike zehlabathi kamva kule ntwasahlobo.
Ekugqibeleni, I-Samsung Galaxy A40 nayo yadweliswa. Esi sixhobo sasibonwa ngaphambili kwiwebhusayithi yeSamsung yaseJamani kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ke ayimangalisi into yokuba iqala e-UK.
Akucaci ukuba zontathu iimodeli ziya kubhengezwa ngokusesikweni kungekudala, kodwa kuba inkampani sele iqale ukuvavanya iphepha lemveliso kwiwebhusayithi yayo, ukumiliselwa kwayo akufuneki kube kude.
Inkampani kutshanje ilungelelanise iqhinga layo, ngeenjongo zokunikela ingqalelo ngakumbi kwinqanaba eliphakathi kunye necandelo lohlahlo-lwabiwo mali, ngelixa ligcina ubunkokeli kwicandelo eliphambili. Ukunyuka kwabavelisi baseTshayina kwicandelo eliphakathi kubangele ukuba iSamsung inciphise isabelo sayo koku kwaye ihlupheke, ngokweenzuzo kunye nengeniso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy A90, i-A20e kunye ne-A40 yokuvuza kwiwebhusayithi esemthethweni yase-UK yase-UK
Ungazifihla njani iifoto kunye neevidiyo kwiprofayile yakho kwi-Instagram apho bakuthega khona